24 X ကို7ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှေ့နေများ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမားရှေ့နေများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ၊ စီးပွားရေးရှေ့နေများ၊ အခွန်ရှေ့နေများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းရှေ့နေများ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမားရှေ့နေများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့နေများ၊
ဥပဒေဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများစာရင်း
နေထိုင်ခွင့် | နိုင်ငံသားအဖြစ် | အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် | ဗီဇာ
တစ် ဦး တည်းရပ်တန့်နိုင်သည့်တတ်နိုင်သည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့များ၊ စီးပွားရေးရှေ့နေများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းရှေ့နေများ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမားရှေ့နေများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများ၊ အခွန်ရှေ့နေများ၊ အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရှေ့နေများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့နေများ၊ စီးပွားဖြစ်ရှေ့နေများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ၊ စီးပွားရေးရှေ့နေများ၊ အလုပ်သမားကော်ပိုရေးရှင်းရှေ့နေများ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမားရှေ့နေများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများ၊ အခွန်ရှေ့နေများ၊ အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရှေ့နေများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ၊ စီးပွားဖြစ်ရှေ့နေများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ အခွန်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ အိမ်ခြံမြေဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းဆိုင်ရာရှေ့ရပျ၊ ရှေ့နေ၊ စီးပွားဖြစ်ရှေ့ရပျ၊ တရားရေးရှေ့ရပျ၊
သင့်တွင်သင်၏ပါ ၀ င်မှုလိုအပ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဥပဒေရှေ့နေများနှင့်စီးပွားရေးရှေ့နေများမှတစ်ဆင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမှသည်အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအထိစီးပွားရေးဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှု၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်သက်ဆိုင်သောတရား ၀ င်မှုများအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်း၊
6000 တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများကယုံကြည်စိတ်ချရသော
ကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်၏တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်တွင်ချွေတာပါ
အကောင်းဆုံးအဘို့ငါတို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး ကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများအကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများရှေ့နေများအကောင်းဆုံး အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများအကောင်းဆုံး အခွန်ရှေ့နေများအကောင်းဆုံး ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့နေများအကောင်းဆုံး အထွေထွေလေ့ကျင့်မှုရှေ့နေများအကောင်းဆုံး မှတ်ပုံတင်ခြင်းရှေ့နေများအကောင်းဆုံး အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအကောင်းဆုံးဘဏ္financialာရေးရှေ့နေများ စီးပွားဖြစ်ရှေ့နေများအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာရှေ့နေများလည်းအကောင်းဆုံးအဖြစ်လူသိများ စီးပွားရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး စီးပွားရေး Paralegalအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးရှေ့ရပျအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး စီးပွားရေး barristers နှင့်များအတွက် အခမဲ့ဥပဒေရေးရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး.
ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ၊ ရှေ့နေများသည်အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အိမ်ဝယ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များအပြင်လူတစ် ဦး သည်သူ / သူမ၏ဘ ၀ တွင်လိုအပ်သောစျေးကြီးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏယူဆလေ့ရှိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာသင်သည်မှန်ကန်သောမိတ်ဖက်ရှိပါကကုန်ကျစရိတ်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်း၊ ကျောင်းသားများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်တန်ဖိုးနည်းသောတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်ပေးသည်။ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ နိုင်ငံတကာပညာရေး၊ အလုပ်ပါမစ်၊ စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာချထားခြင်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေအကြံပေးခြင်း၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ရောင်းဝယ်ရေးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Accounts Outsourcing၊ Virtual Office၊ Virtual Phone နံပါတ်များ၊ Domain၊ Hosting၊ Cloud ဖြေရှင်းချက်များ၊ စိတ်ကြိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းငှားရမ်းခြင်း၊ HR outsourcing၊ CRM တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ စီးပွားရေးလိုင်စင်ချခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ လိုဂိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ စီးပွားရေးရန်ပုံငွေ၊ အစုရှယ်ယာဝင်နှင့်အသင်း ၀ င်သဘောတူညီချက်များ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခြင်းနှင့်ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ၊ စာချုပ်များနှင့်သဘောတူညီချက်များကိုမူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ခစီမံခန့်ခွဲနေကြသည် y Million Makers သို့သော်ရှုပ်ထွေးသောဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်အထောက်အပံ့များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ Tie-up / Associates များ - အကောင်းဆုံးနှင့်အတွေ့အကြုံရှိရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများရှိရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည် 247ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပြသနာများသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာပြanyနာများအားသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အာမေးနီးယား၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ရုရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့တွင်အကောင်းဆုံးညှိနှိုင်းနှုန်းထားများရှိသည်။ အိန္ဒိယ၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ Australiaစတြေးလျ၊ သြစတြီးယား၊ ဘယ်လာရုစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ကနေဒါ၊ တရုတ်၊ ခရိုအေးရှား၊ ဆိုက်ပရက်စ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ အီကွေဒေါ၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ ဖင်လန်၊ ဂျော်ဒန်၊ မလေးရှား၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေး၊ ရိုမေးနီးယား၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ တူရကီ၊ ယူကရိန်း၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ထိပ်တန်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ, ထိပ် စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, ထိပ် စီးပွားရေးရှေ့ရပျ, ထိပ် ကော်ပိုရိတ်ရှေ့ရပျ, ထိပ် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ဝယ်ယူရှေ့ရပျ, ထိပ် အလုပ်အကိုင်ရှေ့ရပျ, ထိပ် အခွန်ရှေ့ရပျ, ထိပ် ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့ရပျ, ထိပ် ယေဘုယျအလေ့အကျင့်ရှေ့ရပျ, ထိပ် ဆွဲသွင်းပါဝင်ရှေ့ရပျ, ထိပ် အိမ်ခြံမြေရှေ့ရပျထိပ်တန်းဘဏ္financialာရေးရှေ့ရပျ, ထိပ်တန်း စီးပွားဖြစ်ရှေ့ရပျ, ထိပ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရားရှေ့ရပျထိပ်တန်းအဖြစ်လူသိများလည်း စီးပွားရေးရှေ့နေများ, ထိပ် စီးပွားရေး Paralegal, ထိပ် စီးပွားရေးရှေ့နေများ, ထိပ် စီးပွားရေးရှေ့ရပျ နှင့်ထိပ် စီးပွားရေး barristers.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း
လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာများ - ၎င်းတို့၏အခြေအနေကိုကာကွယ်ရန်
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (IT) ကိစ္စများ
တတ်နိုင်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ, တတ်နိုင် စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, တတ်နိုင် စီးပွားရေးရှေ့နေများ, တတ်နိုင် ကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများ, တတ်နိုင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများရှေ့နေများ, တတ်နိုင် အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများ, တတ်နိုင် အခွန်ရှေ့နေများ, တတ်နိုင် ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့နေများ, တတ်နိုင် ယေဘုယျအလေ့အကျင့်ရှေ့နေများ, တတ်နိုင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းရှေ့နေများ, တတ်နိုင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများတတ်နိုင်ဘဏ္financialာရေးရှေ့နေများ, တတ်နိုင် စီးပွားဖြစ်ရှေ့နေများ, တတ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေ့နေများတတ်နိုင်အဖြစ်လူသိများလည်း စီးပွားရေးရှေ့နေများ, တတ်နိုင် စီးပွားရေး Paralegal, တတ်နိုင် စီးပွားရေးရှေ့ရပျ, တတ်နိုင် စီးပွားရေးရှေ့နေများ နှင့်တတ်နိုင် စီးပွားရေး barristers.
စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ဖြင့်ဥပဒေရေးရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း $100
မော်တော်ယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများရေးဆွဲခြင်း (လျှောက်လွှာ၊ အဆို၊ တိုင်ကြားချက်စသဖြင့်) $200
တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်တရားဝင်အစီအစဉ်များ $500
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တရားဝင် packets တွေကို $2000
အရပ်ဖက် $ 300 ကနေစတင်
ရာဇဝတ်ကောင် $ 500 ကနေစတင်
အုပ်ချုပ်ရေး $ 250 ကနေစတင်
ရာဇဝတ်ကောင် $ 300 ကနေစတင်
ပထမ ဦး ဆုံးအမှုတရားရုံးတွင်ကိုယ်စားပြုမှု
အရပ်ဖက် $ 750 ကနေစတင်
ရာဇဝတ်ကောင် $ 1000 ကနေစတင်
အုပ်ချုပ်ရေး $ 500 ကနေစတင်
စျေးအသက်သာဆုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများစျေးအသက်သာဆုံး စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ဝယ်ယူဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး အလုပ်အကိုင်ဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး အခွန်ဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး အထွေထွေအလေ့အကျင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး အိမ်ခြံမြေဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံးဘဏ္lawာရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားဖြစ်ဥပဒေကုမ္ပဏီများစျေးအသက်သာဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရားဥပဒေကုမ္ပဏီများ, အစစျေးအသက်သာဆုံးအဖြစ်လူသိများ စီးပွားရေးရှေ့နေများစျေးအသက်သာဆုံး စီးပွားရေး Paralegalစျေးအသက်သာဆုံး စီးပွားရေးရှေ့ရပျစျေးအသက်သာဆုံး စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ နှင့်စျေးအသက်သာဆုံး စီးပွားရေး barristers.
နိုင်ငံပေါင်း 106 အတွက်တရားဝင်မိတ်ဖက်
ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာအတွေ့အကြုံများဖြင့်သင်အကောင်းဆုံးနှင့်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အရေးကြီးသည်။
ဥရောပဥပဒေ၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ သမုဒ္ဒရာ၊ ကာရစ်ဘီယံနှင့်အာရှတို့တွင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပြည့်စုံသောနားလည်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်အတွေ့အကြုံများရှိပြီးသူတို့သည်သင်၏ဒေသခံဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့သည်ဒေသဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏အကူအညီဖြင့်သင့်အားလမ်းညွှန်ပေးသည့်တရားစီရင်မှုမျိုးစုံရှိတရားစီရင်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကူညီပေးနေသည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အရောင်းအဝယ်အတွက်ခုံသမာဓိ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများအပေါ်နှင့်ခုံသမာဓိလုပ်ဆောင်သွားရန်။
ထို့အပြင်၊ သင်သည်ကုမ္ပဏီအသစ်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်သို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာသို့ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေပါကရှေ့နေများသည်တိုင်းပြည်မဟုတ်သည့်အခြားဒေသများရှိအစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်ညှိနှိုင်းရာတွင်ကူညီနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်စီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကိုအပြီးသတ်ရန်ပြင်ဆင်နေပါကလိုအပ်သည်။ လိုက်နာမှုသေချာစေရန်သို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်တစ်ကိုယ်စားလှယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေရှေ့နေသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုသက်သာစေရန်အဓိကတာ ၀ န်ရှိသည်။ ၎င်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ချောမွေ့။ အကျိုးရှိစွာအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အခွန်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာအကူအညီနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်နေ့စဉ်လိုက်နာမှုတို့ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဥပဒေဖောက်သည်များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဥပဒေရေးရာလေ့ကျင့်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဝန်ဆောင်မှု, နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရှေ့နေများ, နိုင်ငံတကာကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ အခွန်ရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ အထွေထွေလေ့ကျင့်မှုရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္financialာရေးရှေ့နေများ စီးပွားဖြစ်ရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာရှေ့နေများလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖြစ်လူသိများ စီးပွားရေးရှေ့နေများနိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး Paralegalနိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးရှေ့ရပျနိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှေ့နေများ နှင့်နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး barristers.
$500.00 / တစ်နှစ်
$1000.00 / တစ်နှစ်
$2000.00 / လ
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ, မြို့ပြ, အုပ်ချုပ်ရေး
တောင်းဆိုမှု ၁၉,၁၃၂ ခုနှင့်ရေတွက်နေဆဲ…
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်ဥပဒေရေးရာအစီအစဉ်များတွင်အောက်ဖော်ပြပါဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်
န်ဆောင်မှုများ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်
စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ဖြင့်ဥပဒေရေးရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း အဘယ်သူမျှမ
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုရှေ့နေထံအပ်နှင်းပါ တစ်နှစ် ၁၂ ကြိမ် (သို့မဟုတ်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်)
စာချုပ်နိဂုံးချုပ်ထောက်ခံမှု တစ်နှစ်လျှင်3ကြိမ်
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုရှေ့နေထံအပ်နှင်းပါ တစ်နှစ်လျှင် ၂၄ ကြိမ် (သို့မဟုတ်တစ်လလျှင် ၂ ကြိမ်)
စာချုပ်နိဂုံးချုပ်ထောက်ခံမှု တစ်နှစ်လျှင်6ကြိမ်
စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ဖြင့်ဥပဒေရေးရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း Unlimited
စီးပွားရေးနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများအတွက်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ။
အကောင်းဆုံးဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုတရားဝင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်စီးပွားရေးပတ် ၀ န်းကျင်မှကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်တရားဝင်အောင်မြင်မှုရရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအတွေ့အကြုံရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာဘာသာစကားကိုနားလည်ပြီးစီးပွားရေးမိသားစုများနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တရား ၀ င်အကူအညီများပေးသည်။
တစ် ဦး ချင်း၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် -
Business Process Outsourcing အတွက်စီးပွားရေးရှေ့နေများ
Food & Beverage အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာရှေ့ရွက်
ကော်ပိုရိတ်များနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တရား ၀ င်စံနှုန်းများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အထူးတရားဝင်ထောက်ခံမှုအမြဲရှိသည်။ မည်သည့်ဥပဒေရေးရာပြorနာသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကူအညီ။
ဥပဒေရေးရာအကြံပေးခြင်းအပြင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်နေရာတည်းနှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်စေနိုင်သည့်တရားဝင်ဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းပေးသည်။ 106 နိုင်ငံများ။
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိသားစုများကိုကူညီသောနိုင်ငံများ။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်နှင့်နိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ။
နှင့်အတူအကူအညီလိုသည် ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်အကောင့် သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များ။
လိုအပ်ချက် အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ ကငွေပေးချေမှုအကောင့်သို့မဟုတ် crypto ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများပြီးနောက် မင်းစီစဉ်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးဝယ်ကျနော်တို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ HR ကုမ္ပဏီ ပိုမြန်ဖြည့်ရာထူးအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်။
လိုအပ်ချက် ကို virtual သို့မဟုတ် tollfree နံပါတ်များကို 103 နိုင်ငံများအတွက်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည် crypto ငွေကြေးလိုင်စင် ကမ်းလွန်နှင့်အီးယူတရားစီရင်မှုမှတဆင့်။
Virtual ရုံး 66 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများမှာလိပ်စာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် တရားဝင်စီးပွားရေးစတင်ပါ.
နှင့်အတူအကူအညီလိုသည် နေထိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့် စီးပွားရေးပိုင်ရှင် (များ) အတွက်။
IP နှင့်ကူညီပေးပါမည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာ။
၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ အီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဌာနမှထင်မြင်ယူဆသောသင်၏စီးပွားရေးကိုအကောင်းဆုံးမြှင့်တင်ရေးအထောက်အပံ့ဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုကူညီနိုင်သည်။ blockchain ဖွံ့ဖြိုးရေးန်ဆောင်မှုအက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ SEO ဆိုသည်မှာန်ဆောင်မှုများ.
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အဓိပ္ပါယ်မှာအဘယ်နည်း။
ဥပဒေဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဥပဒေအကြံဥာဏ်၊ တရားဝင်ကိုယ်စားပြုမှုသို့မဟုတ်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့များသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ အကောင်းဆုံးတရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ | တရားဝင်ပံ့ပိုးမှု အကောင်းဆုံးတရားဝင်အထောက်အပံ့။ စျေးပေါသောဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့ | တရားဝင် | ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ | အကောင်းဆုံးတရားဝင်အသင်း | တတ်နိုင်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့
စီးပွားရေးရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးရှေ့နေများ စျေးပေါသောစီးပွားရေးရှေ့နေများ စီးပွားရေးရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးရှေ့နေများ စျေးပေါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေ့နေများ | စီးပွားရေးရှေ့ရပျ | အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာရှေ့ရွေ | စျေးနှုန်းချိုသာသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာရှေ့ရွက် | စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ စျေးနှုန်းချိုသာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေများ စီးပွားရေး Paralegal | အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးရှေ့နေများ | တတ်နိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေအကြံပေး
Business Lawyer ကိုဆက်သွယ်ပါ
အလုပ်သမားရှေ့နေများ (သို့) အလုပ်သမားရှေ့နေများအဖြစ်လူသိများသောအလုပ်သမားရှေ့နေများကိုအလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများနှင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအကြားကျန်းမာရေးဥပဒေအရကောင်းမွန်သောဥပဒေရေးရာဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာတွင်ပညာရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများ စျေးချိုသောအလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများ အလုပ်ခန့်အပ်မှုရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးအလုပ်ခန့်အပ်မှုရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောအလုပ်ရှင်ရှေ့နေများ အလုပ်အကိုင်ရူပက အကောင်းဆုံးအလုပ်ခန့်အပ်မှု စျေးနှုန်းချိုသာသောအလုပ်အကိုင်ရှိသူများ အလုပ်အကိုင်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံးအလုပ်ခန့်အပ်မှုဥပဒေကုမ္ပဏီများ စျေးနှုန်းချိုသာသောအလုပ်အကိုင်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ | အလုပ်အကိုင်ဥပဒေအကြံပေး | အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေး | တတ်နိုင်အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေချုပ်
Employment Lawyer ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းရှေ့နေများ စျေးပေါသောကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများ ကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများ စျေးပေါသောကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများ ကော်ပိုရိတ်ရှေ့ရပျ | အကောင်းဆုံးကော်ပိုရိတ်ရှေ့ရပျ | စျေးပေါသောကော်ပိုရိတ်ရှေ့ရပျ | ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံးကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ စျေးပေါသောကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ | Corporate Paralegal | အကောင်းဆုံးကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများ | စျေးသက်သာကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေချုပ်
Corporate Lawyer ကိုဆက်သွယ်ပါ
M&A ရှေ့နေများသို့မဟုတ် M & A ရှေ့နေများဟုလည်းလူသိများသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအားကူညီပံ့ပိုးပေးသောကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ပူးပေါင်းမှုနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများရှေ့နေများ | အကောင်းဆုံးပေါင်းစည်းမှုနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာရှေ့နေများ ပူးပေါင်းမှုနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများရှေ့နေများ | အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ဝယ်ယူရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာရှေ့နေများ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ဝယ်ယူမှုရှေ့ရပျ | အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ဝယ်ယူရှေ့ရပျ | စျေးနှုန်းချိုသာသောပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ရယူခြင်း ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းခြင်းနှင့်ရယူခြင်းဥပဒေကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ဝယ်ယူဥပဒေကုမ္ပဏီများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ရယူခြင်းဥပဒေကုမ္ပဏီများ အတူတကွနှင့်ဝယ်ယူမှုဥပဒေပညာရှင် | အကောင်းဆုံးပေါင်းစည်းမှုနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ paralegal | တတ်နိုင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ဝယ်ယူမှုဥပဒေပညာရှင်
Mergers and acquisitions Lawyer ကိုဆက်သွယ်ပါ
တီထွင်သူများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ တီထွင်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတွေးအခေါ်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖန်တီးသူများ၊ မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ရေးနှင့်မူပိုင်ခွင့်များကာကွယ်ခြင်းသည်တီထွင်သူများနှင့်အနုပညာရှင်များအားတစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတွေးအမြင်များကိုကူးယူခြင်းမှရှောင်ရှားရန်နှင့်ရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည့်ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှု။
မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာရှေ့ရွေ | အကောင်းဆုံးဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်တောင်းခံသူများ စျေးနှုန်းချိုသာသောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်တောင်းခံသူများ | ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံးဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ စျေးနှုန်းချိုသာသောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီများ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပညာရှင် အကောင်းဆုံးဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပညာရှင် တတ်နိုင်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေအကြံပေး
Intellectual Property Lawyer ကိုဆက်သွယ်ပါ
မိသားစုရှေ့နေများအားမိသားစုအငြင်းပွားမှုများ၊ ကွာရှင်းခြင်း၊ ကလေးထိန်းခြင်းနှင့်ကလေးထိန်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်မိသားစုဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်အကူအညီပေးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
မိသားစုရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးမိသားစုရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောမိသားစုရှေ့နေများ မိသားစုရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးမိသားစုရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောမိသားစုရှေ့နေများ မိသားစုရှေ့ရွေ | အကောင်းဆုံးမိသားစုရှေ့ရွေ | စျေးနှုန်းချိုသာသောမိသားစုရှေ့ရွက် | မိသားစုဥပဒေကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံးမိသားစုဥပဒေကုမ္ပဏီများ စျေးနှုန်းချိုသာသောမိသားစုဥပဒေကုမ္ပဏီများ မိသားစုရှေ့မှောက်၌ | အကောင်းဆုံးမိသားစုရှေ့နေချုပ် | စျေးသက်သာမိသားစုဥပဒေအကြံပေး
Family Lawyer ကိုဆက်သွယ်ပါ
ပညာရေးရှေ့နေကိုဥပဒေပညာရေးပညာရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်များနှင့်အစိုးရသည်ကျောင်းသားများ၏လုံခြုံမှုနှင့်စည်းကမ်း၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ အခွင့်အရေးနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုကူညီခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားများနှင့်တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူတကွလုံခြုံမှုနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသောအစိုးရကိုကူညီသည်။ ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ။
ပညာရေးရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးပညာရေးရှေ့နေများ စျေးချိုသောပညာရေးရှေ့နေများ ပညာရေးရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးပညာရေးရှေ့နေများ စျေးသက်သာပညာရေးရှေ့နေများ ပညာရေးရှေ့ရပျ | အကောင်းဆုံးပညာရေးရှေ့ရပျ | စျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာရှေ့ရွက် | ပညာရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံးပညာရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ စျေးသက်သာပညာရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ | ပညာရေးဥပဒေအကြံပေး | အကောင်းဆုံးပညာရေးဥပဒေအကြံပေး | တတ်နိုင်ပညာရေးဥပဒေအကြံပေး
Education Lawyer ကိုဆက်သွယ်ပါ
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများအားတရား ၀ င်အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းင်းတို့၏ဖောက်သည်များအားအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်အိမ်ခြံမြေရှာဖွေရန်ကူညီခြင်း၊ သန့်ရှင်းပြီးရှင်းလင်းသောခေါင်းစဉ်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံ့လဝီရိယရှိရှိဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အငြင်းပွားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသည်မြေငှားစာချုပ်များရေးဆွဲရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး MOU များသည်ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) မြေယာအငြင်းပွားမှုများကိုကူညီနိုင်သည်။
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ | အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ | အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ | အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ | အိမ်ခြံမြေဥပဒေကုမ္ပဏီများ | အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဥပဒေကုမ္ပဏီများ စျေးနှုန်းချိုသာသောအိမ်ခြံမြေဥပဒေကုမ္ပဏီများ | အိမ်ခြံမြေဥပဒေအကြံပေး | အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ | စျေးနှုန်းချိုသာသောအိမ်ခြံမြေဥပဒေအကြံပေး
အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ - ရှေ့နေ
Antigua နှင့် Barbuda ရှိတရားရေးဌာန
ဘေလီဇ်အတွက်တရားရေး ဦး စီးဌာန
Puerto Rico ရှိတရားရေးဌာန
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိတရားရေးဌာန
ဟန်ဂေရီအတွက်တရားရေး ဦး စီးဌာန
San Marino ရှိတရားရေးဌာန
တူရကီအတွက်တရားရေး ဦး စီးဌာန
Alabama တှငျတရားရေး ဦး စီးဌာန
New Hampshire ရှိတရားရေးဌာန
Rhode Island ရှိတရားရေးဌာန
မလေးရှားနိုင်ငံရှိတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Antigua နှင့် Barbuda ရှိတရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ
BVI ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Grenada ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Puerto Rico အတွက်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှု
Saint Kitts ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
အာမေးနီးယားရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘီလာရုစ်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကာဇက်စတန်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကာဂျစ္စတန်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
San Marino အတွက်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှု
ဂရိနိုင်ငံရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
လတ်ဗီးယားရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
မော်လတာနိုင်ငံရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ
မက္ကဆီကိုရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကိုလံဘီယာခရိုင်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
အိုင်ဒါဟိုရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Indiana ပြည်နယ်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
လူဝီဇီယားနားတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
မေရီလန်းရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
New Hampshire ရှိတရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ
North Dakota ရှိတရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ
Pennsylvania ပြည်နယ်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Rhode Island ရှိတရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ
Tennessee ပြည်နယ်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ